DAAWO UNA CODEE: UEFA Oo Soo Saartay Xidigaha Ku Tartamaya Goolkii Usbuuca Ee UEFA Champions Leaque Ugu Fiicnaa. – GOOL24.NET
DAAWO UNA CODEE: UEFA Oo Soo Saartay Xidigaha Ku Tartamaya Goolkii Usbuuca Ee UEFA Champions Leaque Ugu Fiicnaa.
Xidhiidhka kubbada cagta yurub ee UEFA ayaa soo saartay xidigaha u tartamaya goolkii ugu quruxda badnaa kulamadii lixaad ee UEFA Champions Leaque. Waxaa kulamadii lixaad ee Champions Leaque laga dhaliyay 33 gool waxayna qayb ka noqdeen rekoodhka ay UEFA xili ciyaareedkan u diwaan galisay in uu noqday xili ciyaareedkii abid goolasha ugu badan laga dhaliyay heerka Goupyada Champions Leaque.
Kooxaha PSG iyo Liverpool ayaa noqday kooxaha doorka ugu wayn ku yeeshay rekoodhkan iyada oo PSG rekoodh ku dhigtay in ay noqotay kooxda abid goolasha ugu badan ka soo dhalisay heerka Goupyada iyada oo 25 gool ku soo dhalisay lix kulan halka Liverpool ay dhinaceeda rekoodh ugu dhigtay kooxaha Premier Leaque iyada oo noqtay kooxdii abid ugu horaysay ee 23 gool ka soo dhalisay heerka groupyada UEFA Champions Leaque.
Laakiin UEFA ayaa shan gool oo kaliya ka soo xushay dhamaan 33 kii gool ee laga dhaliyay kulamadii ugu danbeeyay heerka Groupyada Champions Leaque iyada goolka ay jamaahiirta kubbada cagta aduunku codka ugu badan siiyaan uu guulaysan doono.
Sadio Mane oo gool layaableh ka dhaliyay kulankii Spartak Moscow iyo Cristiano Ronaldo oo isna gool cajiib ah ka dhaliyay kulankii Dortmund ayaa hogaaminaya liiskan iyada oo ay jamaahiirta kubbada cagtu noqon doonaan kuwa go’aamin doona xidiga guulaysan doona.
Xidiga kooxda Juventus ee Bernardeschi, xidiga kooxda Shakhtar ee Bernard iyo xidiga kooxda Tottenham ee Son ayaa dhamaantood goolal qurux badan ka soo dhaliyay kulamadii la soo ciyaaray waxayna qayb ka yihiin liiska musharixiinta goolka usbuuca ugu quruxda badnaa UCL.
Haddaba akhriste ma doonaysaa in codkaaga aad saamayn ugu yeelan kartid goolka usbuuca ee Champions Leaque ugu fiican? Haddii ay jawaabtu haa tahay halkan ka daawo isla markaana u codee goolka ugu quruxda badan. Goolka Usbuuca Ee UEFA Champions Leaque.